Fikarohana momba ny firaisana Teraka tao amin'ny Oniversite Teresa any Avila Susan Trout sy John of the Cross Kenneth Wapnick - Fikarohana momba ny vatana teraka
Fomba fiaina: mentalism maro
Susan Trout amin'ny maha-teraka tao Saint-Teresa an'i Avila
Efatra taona lasa izay dia nolazain'ny mpahita iray fa lasa teraka indray ao amin'ny vatana vaovao aho Teresa avy any Avila. Tsy nisy dikany tamiko izany tamin'izany fotoana izany satria notezaina tao amina fiangonana kristiana fundamentaliste aho ary nilaza fa ny olona masina voalaza ao amin'ny Baiboly ihany no tena olo-masina. Ny fahalalana momba ny nofo Teresa dia tonga tamin'ny fotoana teo amin'ny fiainako rehefa namoy fo tanteraka aho. Ny nilazana fa olo-masina aho taloha dia tsy nifanaraka tamin'ny fiainako namoy fo sy ny fahalalako zavatra ara-panahy. Na izany aza, nihevitra ny vaovao ho toy ny hafatry ny fanantenana aho. Taorian'izay, nolazaina tamiko ny fahatongavako ho Teresa avy amin'ny mpampianatra ara-panahy hafa, ny intuitives, ny guru ary ny Light Workers. Nanapa-kevitra ihany aho tamin'ny farany fa misy antony tokony hianarako momba ny fiainan'i Teresa, izay nitranga 500 taona lasa izay (1515-1582).
Betsaka ny zavatra nosoratana momba ny fiainan'i Teresa tany Espana ho fanavaozana mahery vaika ny Ordonnement Carmelite ary mpikaroka faran'izay mahay momba ny mistika. Nanana fanomezana ho an'ny fitantanan-draharaha izy ary maniry ny hiresaka mivantana amin'Andriamanitra. Noheverina ho fanahy iniana izy, tsy dia nisy dikany, very maina ary nahita fahitana. Nanana "sainy samirery" izy ary tapa-kevitra mafy ny hanohitra ny fifehezan'i Vatikana ary hanangana efitrano hitohizan'ny fanavaozana azy. Isaky ny mifandray amin'i Teresa aho dia tsapako ny halalin'ny tolona anatiny sy ny faniriany lalina hihoatra ny “fikorontanan'ny” toetrany ary hiditra amin'Andriamanitra. Tsapako ny fahamarinana misy ao ambanin'ny asa sorany sy mihoatra ny zavatra soratan'ny hafa momba azy. Ny fiainany dia tolona be loatra taminy mba tsy hinoany fa niavaka izy tamin'ny lafiny rehetra.
Ny fiainana taloha Talenta sy ny toetran'ny olona
Ireto lafiny manaraka ny natioran'i Teresa ireto dia toa ampahany amin'ny ahy manokana. Ny sasany amin'ireo zavatra navelan'i Teresa tsy vita tamin'ny fiainany ara-panahy 500 taona lasa izay dia toa tapa-kevitra ny hanao amin'ny fiainako manokana aho. Nentiko teto amin'ity fiainana ity ny sasany amin'ireo fanomezana sy fanamby nataony.
Fiainana ara-panahy: Toa an'i Teresa, ny fifikirana amin'Andriamanitra no ifantohan'ny fiainako voalohany; ny hany niriko ho tonga dia fitaovana mavitrika ny Fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fanompoana ny olombelona. Tamin'ny fahazazako dia niala tamin'ny Kristianisma voalamina aho satria tsapako fa nitazona ahy “tany amin'ny akanin-jaza.” Farany, hitako ny tranoko ara-panahy tao amin'ny Traditions Atsinanana sy amin'ny metafisika / Fahendrena Fahiny. Mieritreritra malalaka sy tsy misy ezaka aho hahatsapa traikefa ara-panahy manerantany sy ny fampandrosoana ny saina sy ny fanahy. Fantatro ny maha-zava-dehibe ny fiainana ara-psikolojika sy / na ara-panahy ananan'ny olona na dia tsy tadidiko aza ny fananako izany zavatra niainako izany (amin'ity fiainana ity). Na dia mbola tanora aza aho dia nofaritan'ny olona ho olona tena "lalina" aho, angamba toetra kalitao Teresa.
Writing: Nanoratra boky roa aho izay tsapako ho an'i Teresa The Castle. Nanana fahalianana nandritra ny androm-piainana aho tamin'ny fahatakarana ny fampandrosoana ny fanahy, ny fitarihana ary ny fanompoana. Nahatsapa ho nahazo aingam-panahy aho hanoratra momba ny fivelarana sy ny fanompoana fanahy, nitondra ny fanoharana momba ny fanahy an'i Teresa ho an'ny dingana manaraka. Nanoratra aho Teraka mba hanompo: Ny fivoaran'ny fanahy amin'ny fanompoana ao amin'ny 1997 sy Ny Mpitarika mifoha: Ny mpitarika ho toy ny efitrano fianarana ny fanahy in 2005.
Sary mampihetsi-po: Betsaka ny voasoratra momba ny fahasarotan'i Teresa sy ny zava-misy fa tsy antitra izy raha tsy herintaona talohan'ny nahafatesany tamin'ny taona 68. Tsy misy sary an'i Teresa; vita ny sary hosodoko fony izy teo amin'ny faha-60 taonany, izay nolazain'i Teresa fa satria nahatonga azy ho ratsy tarehy ilay mpanao hosodoko dia hanaiky azy io ho fotoana iray hampitomboana ny fanetren-tena. Ny mpanoratra dia manoratra matetika momba ny hatsaran'ny hodiny, ny masony, ny tanany ary ny tongony. Raha mbola tadidiko dia "nanao fifanarahana lehibe" ny olona momba ny hatsaran'ny hoditra, ny masoko, ny tanako ary ny tongotro.
tapa-kevitra: Miaraka amin'i Teresa aho amin'ny filazan'ny hafa ahy ho manana finiavana matanjaka sy mandroso fatratra ary tapa-kevitra izay manohitra ny famaritana. Toa an'i Teresa, tapa-kevitra ny hanaraka ny fahitako aho ary hitondra azy ho tena izy amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo fitsipika ara-psikolojika, filamatra ara-panahy ary asa tsara.
Nun-pitoviana: Nandritra ny androm-piainako, ireo mpiara-miasa, mpianatra ary namana dia nilaza tamiko fa toy ny masera aho, manao toy ny masera ary mitarika toy ny Reny ambony. Masera katolika fantatro fa mitarika fikambanana toy ny trano fivarotan-tena marina aho, porofon'ny fiorenan'ny fitsipi-pifehezana ny fotokevitra ara-psikolojika sy ara-panahy amin'ny asa eto amin'izao tontolo izao ary amin'ny fitanana fari-pitsipika ambony ho an'ny tenako sy ho an'ny hafa. Tsy toa an'i Teresa, tsy extrovert aho ary tsy manana toetra mampientanentana. Mirona "manafina" ny Fahazavako aho… tsy mitovy amin'i Teresa io, izay naneho hevitra tamin'ny fomba manaitra. Mahatsapa aho fa ity fanovana ity dia fanandramana mandanjalanja ny angovo ivelany sy anatiny. Ary koa, tsy maintsy nianatra ny fomba handanjalanjana ny fikolokoloana tena amin'ny fikarakaran'ny hafa aho; Teresa dia nanao sorona ny filàny manokana ho an'ny hafa ary manana fironana matanjaka mitovy amin'izany aho. Nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-pihetseham-po nataon'i Teresa io tsy fitoviana io.
fanavaozana: Tahaka an'i Teresa izay mpanorina sy mpitarika ny lamina Carmelite nohavaozina, izaho koa dia reformista, mpitarika ary mpanorina departemanta, fitomboan'ny tena manokana sy ny fomba fitsaboana, ny asa ary ny fikambanana. Tahaka an'i Teresa, voatosika mafy aho hamerina ilay tsy ara-dalàna hiverina amin'ny tsy fivadihana miaraka amin'ny tena làlany. Teresa, na izany aza, indraindray dia nampidina ny fari-pitsipiny niaraka tamin'izay tsapany fa hanohana ara-bola ny fivoriamben'izy ireo. Amin'ity fiainana ity dia nandà ny hampihena ny fenitra etika aho amin'ny antony rehetra. Tsy nahatonga ahy ho malaza io indraindray noho ny fanapahan-kevitra sarotra tsy maintsy raisiko, indrindra any am-piasana.
Mpitarika, mpikarakara, ary mpitantana: Toa an'i Teresa, nofaritana ho toy ny voalamina tsara aho ary manana fahatsapana fahenina amin'ny fomba hahitana, hitarika ary hitantanana fikambanana. Nilaza ny ray aman-dreniko fa "teraka voalamina" aho ary nilaza ireo mpiara-miasa amiko fa manana «masinina voahosotra tsara» aho. Tsy misy manadino ny masoko sy ny fankasitrahan'izy ireo ny fifangaroana amin'ny antsipiriany amin'ny hatsarana.
vehivavy: Amin'ny maha matihanina manampy ahy sy amin'ny maha-mpanazatra matihanina ahy amin'ny anjerimanontolo sy ny sehatra tsy mitady tombom-barotra, dia voahodidin'ny vehivavy aho. Mpanolotsaina sy mpampianatra ary mpampianatra azy ireo matetika aho. Nahatsapa i Teresa fa nanao tsirambina ny fikarakarana sy ny fiadanan'ireo masera marobe izy satria tsy nisy foana ny vola ary tsy afaka mitsidika sy manara-maso matetika ny fiadanan'ireo masera naoriny izy. Tamin'ity fiainana ity dia nahatsapa aho fa nanana karma niaraka tamin'ny vehivavy maro (masera taloha?) Ary naniry ny hanitsy ireo fifandraisana ireo. Indraindray aho dia nifanehitra tamina olona iray tamin'ny olana iray teto amin'ity fiainana ity satria tsy nataoko izany tamin'ny andron'i Teresa. Tsy mbola te ho anisan'ny sekolin-tsaina misy ivon-toerana marobe aho satria azoko fa saika tsy azo atao ny manara-maso ny fiadanan'izy ireo.
Men: Betsaka ny zavatra nosoratana momba ny fahalianan'ny lehilahy an'i Teresa ary izy ireo ho azy; inoana fa manodikodina ny lehilahy matetika izy ireo ary izy ireo, mba hahazoany vola sy trano ilaina amin'ny efitrano fivoriany. Amin'ity fiainana ity dia nanandrana namolavola fifandraisana miasa salama amin'ny lehilahy aho ary hianatra hahatakatra sy hanaja azy ireo. Miorina mafy amin'ny tsy fandeferana aho amin'ny fitondran-tena tsy mendrika ataon'ny olombelona. Afa-tsy fanambadiana fohy, izaho, toa an'i Teresa, dia tsy nisafidy lalan'ny fiainana fanambadiana sy zanaka.
Teresa avy any Avila Reborn dia mihaona amin'ny fanamboarana an'i Jesoa tamin'ny Hazofijaliana
John of the Cross: Juan de la Cruz, moanina iray avy any Carmelite, dia dimy amby roapolo ary efa ho lasa herim-pianakaviana tao amin'ny Fitsipika Primitive tamin'ny baikony rehefa nihaona tamin'i Teresa, dimampolo taona izy. Nandresy lahatra azy i Teresa mba hitarika ny fototra iangonany ary ho sandriny ankavanana matanjaka amin'ny fitantanana ireo efitrano fivoriana. Lasa talen'ny ara-panahy izy tamin'ny farany. Fantatra fa mifankatia sy mifanaja fatratra izy ireo, na eo aza ny toetra tsy mitovy. I Marcelle Auclair, iray amin'ireo mpahay tantaram-piainan'i Teresa, dia nampitaha azy roa: “Ho azy dia ny fihetsika no fitiavana. Ho azy, ny fitiavana dia ny fandentehana tanteraka ny saina. " Taorian'ny fahafatesany tamin'ny faha-68 taonany, i Juan de la Cruz dia nandray ny fitarihana ireo efitrano fandraisam-bahiny mba hahazoana antoka fa hitohy ny asany.
Tao amin'ny 1982, dia nihaona tamin'ny mpampianatra ara-panahy fanta-daza aho ary fantatro avy hatrany John of the Cross. Hatramin'izay dia niresaka momba ny fahatongavan'i Teresa-Juan nofo. Amin'ity fiainana ity dia mitady ny toroheviny toy ny nataoko fony izy talen'ny fanahy i Teresa 500 taona lasa izay. Manaja ny faniriany tsy hotononina anarana aho.
Famaranana: Ny fahatongavan'ny Teresa ho lasa fandroana ara-panahy ho an'ny fivoarako ara-panahy amin'ity fiainana ity. Izy io dia nanampy ahy hijanona ho fanahy iniana amin'ny fampivoarana ny fanahiko sy ny serivisiko ary tsy ho very amin'ny tontolon'ny materialy. Afaka misafidy ny hivoatra aho ary hahafantatra ireo lamina nanelingelina ny fitomboako ara-panahy tamin'ny fiainana teo aloha ary nitady handrava azy ireo tamin'ity iray ity. Ny fahatsiarovana an'i Teresa dia ny fahatsiarovako ny tena momba ahy.
- Susan Trout, novambra 19, 2006
Kenneth Wapnick amin'ny maha-teraka indray an'i Md Joany ao amin'ny Hazofijaliana
Note from Walter Semkiw, MD: Nandritra ny androm-piainany, Kenneth Wapnick, PhD Tsy naniry ny fiainany taloha rehefa nampahafantarin'i Masindahy John of the Cross, araka ny nofaritan'i Susan Trout. Hatramin'ny naha-lany azy dia mandefa ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray aho. Dr. Wapnick dia fitaovana lehibe tamin'ny famoronana ny boky sy ny rafi-panahy fantatra amin'ny anarana hoe Fianarana amin'ny fahagagana.
Fitoviana ara-batana: Susan Trout dia naneho hevitra momba ny fitoviana amin'ny endri-javatra maro ao Teresa sy ny endriny manokana.
Ny fiainana taloha talenta sy ny fitondran-tena: Susan dia nanamarika fitoviana marobe amin'ny talenta sy ny maha-izy azy teo amin'i Teresa.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Ny fiaraha-miasa ara-panahy teo amin'i Teresa avy any Avila sy i John avy ao amin'ny hazo fijaliana dia navaozina tamin'ny fisakaizan'i Susan Trout sy Kenneth Wapnick.